बुहारी र काका ससुरा बीच अनैतिक सम्बन्ध भएको भेटियो, हात काटेर बुहारीलाई ससुराले सिन्दुर हालेको र म्यासेन्जरमा अस्लिल कुराहरु के के भए श्रीमानले पढेरै सुनाए ! श्रीमतीले श्रीमान लाइ त्यो रात भनेको कुराले श्रीमान छक्क ~ हेर्नुहोस भिडियो सहित ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/बुहारी र काका ससुरा बीच अनैतिक सम्बन्ध भएको भेटियो, हात काटेर बुहारीलाई ससुराले सिन्दुर हालेको र म्यासेन्जरमा अस्लिल कुराहरु के के भए श्रीमानले पढेरै सुनाए ! श्रीमतीले श्रीमान लाइ त्यो रात भनेको कुराले श्रीमान छक्क ~ हेर्नुहोस भिडियो सहित !
वैवाहिक सम्बन्धमा सानोतिनो झ’गडा वा मनमुटाव हुनु स्वाभाविक हो । अहिलेको भागदौड र व्यस्तताको कारणले गर्दा एकअर्कालाई समय दिनु गाह्रो हुँदा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा दरार आउने गर्छ । विवाहपूर्व प्रेम र खुशीले भरिएको जीन्दगी विवाहपछि एउटा कल्पनामा मात्रै सिमित हुन्छ ।
पालिकाको गुम्बाभित्रै यि जोडिले के गरे यस्तो ! देख्ने हरुपनि लाजले भुतुक्कै भए